so Archives - Seattle Traffic
Sidee loo isticmaalaa leymanka baaskiilka, dukaamadaada baaskiillada West Seattle-Duwamish Valley, iyo ka badan. Amniga Baaskiilka iyo Tusaaleyn Isticmaalkooda Bike Parking at Transit FacilitiesHow to Load a Bike on a Bus Bike RackHow to Share the Road with TransitBiking Rules of the RoadHow to Use Bike LanesHow to Safely Bike Around Big Trucks (Video)How to Keep […]
Isticmaal aaladaha hoose iyo maababka lala fal-geli karo si aad u hesh waddada ugu wanaagsan ee baaskiil si aad u tagto halka aad dooneyso. Maabka Seattle Bike (Interactive) Maabka West Seattle iyo Duwamish Valley Bike Map (PDF) Maababka baaskiilada iyo mootooyinka Maabka Xaddidaadda Xawaaraha Seattle (Interactive)Cascade Bicycle Club’s ‘Bridge the Gap’ Map (PDF) Jidadka baaskiil […]
Ku safarka baaskiil ama mooto waa fursad aad u weyn oo looga gudbi karo Buundada Hoose ama lagu gaari karo meylkaaga hore/ugu dambeeya eed ku gaareyso baska. Lime iyo Link wuxuu siinayaa raacid lacag la’aan ah shaqaalaha asaasiga ah iyo dadka u socdaalaya ballamada tallaalka COVID-19. Wax badan ka ogow wadaagga ku saabsan baaskiil iyo mooto. […]
U socdaal si caqli ah, oon ku adkeyn ilahan dheeraadka ah Maabka West Seattle iyo Duwamish Valley Walking (PDF) Jidka koowaad (feet first) Maabka jidka koowaad (feet first): West Seattle Trails (PDF) Barnaamijka Seattle Neighborhood Greenways RCodsiga ruqsadda balooggaaga ee Ku Joog Caafimaad (Stay Healthy) Ka soo hadal arrin ka jirta xaafaddaada
Raadso jidka ugu saaxiibtinimo wanaagsan ee leh aaladahan. Qorshaha Jidka la Mari Karo (Accessible Route) Maabka Meelaha Sareeya (Elevation Accessibility)
Kuma xirna si kastoo aad socdaasho West Seattle, waxey u badan tahay in qaar ka mida socdaallaada ay lugeyn, riixid gawaari gacan ama kuraasta lugaha leh. Waxanu gacan siineynaa dadka si nabad ah ku soconaya ama ordaya iyadoo qaar xaafadaha hadda jira waddooyinka cagaaran (waddooyinka la deggan yahay oo deggan) loo rogayo Ku Noolow Waddooyin […]